WAA MAXAY BARBERRY FAA'IIDO LEH: SIFOOYINKA BOGSASHADA IYO KA HORTAGA - DHIRTA DAWOOYINKA
Barberry beeraha iyo beeraha waa wax aad u yar. Bannaanka udubdhexaadku maaha mid si gaar ah u dan leh in ay la tacaalaan duurka udgoon iyo si buuxda u sameeyaan si aan micne lahayn. Barberry, sifooyinka iyo faa'iidooyinka ay faa'iido u leeyihiin ayaa loo yaqaanay aadanaha muddo dheer. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka (iyada oo aan ka sooci karin inta ka hartay sifooyinka - qurxinta, maqaarka, dhadhanka, iwm) in meesha ugu horeysa waa awoodda bogsiinta ee barberry ama, sida loo yaqaan "lemon northern".
Ma taqaanaa? Waxaa jira noocyo kala duwan, halkaas oo magaca barberry ka yimaado. Mid ka mid ah mid ka mid ah - erayga Giriigga "berbery" - oo ah caleenta qolof ah (qaabka caleemaha, tufaaxa ubaxa jaallaha ah ee barberry u ekaato qolkani). Mid kale ayaa sharraxaya waxa barberry ay tahay in lagu magacaabo magaca warshad Berbers (dadka qadiimiga ah ee Waqooyiga Afrika) oo warshadda u keenay Europe. Barberry si fiican ayey u badbaadinaysaa dhulgariirka cimilada iyo cimilada ee Eurasia, Africa iyo America.
Waxyaabaha kiimikada ee barberry
Barberry (Berberis vulgaris) waxaa badanaa lagu magacaabaa "thorns", "kablyanka", "kareemka", iwm. Waxyaabaha kiimikada ee kiimikada ah, iyo sida, sifooyinka bogsashada ee dhammaan xubnaha dhirta. Waxay ka kooban yihiin:
qiyaastii 11 alkaloids. Barberry waxay soo saartaa walxaha sare ee berberine (tani waa astaankeeda guud), iyo sidoo kale palmitin, berberrubin, columbanin, berberine, iwm;
saliida dufanka leh ee barberry (miraha - 15%);
dharka jaalaha ah (dheeha);
fitamiino (P, E, B1, C, BB, B2, carotene, iwm.);
acids (ascorbic, tartaric, citric, malic);
Qiimaha tamarta ayaa ah 29.6 kcal halkii 100 g.
Ma taqaanaa? Alberoid Berberine, laga helo rhizomes iyo qaybaha kale ee barberry, waxay la mid yihiin guryaha ay ku jiraan quinine, taas oo u oggolaatay in loo isticmaalo daaweynta duumada. Sanadkii 1977, D. Koshtyalova ayaa ogaaday weli awood u leh in lagu daaweeyo barberry: alkaloid ku jira ee afkoda iyo caleemaha of glaucin ku xajisto wuxuu leeyahay bronchodilator iyo saameyn murugo leh.
Waa maxay barberry waxtar leh: bogsiinta guryaha
Barberry waxay leedahay sifooyin u gaar ah bogsashada sababtoo ah isku-dhafka gaarka ah ee kiimikooyinka.
Ka mid ah guryaha ugu qiimaha badan:
suuxdin (wuxuu leeyahay saameyn yar oo saameyn ku leh jirka);
duriinka, diaphoretic (wax ku ool ah ayaa ka caawiya hargabka);
anti-bararka (si wax ku ool ah ula dhaqmo cudurrada nidaamka genitourinary);
antioxidant (wuxuu ka caawiyaa sunta, sunta, xitaa sunta);
tonic iyo immuno taageera;
anti-leukemia iyo anti-kansarka;
Ma taqaanaa? Qaybaha daawooyinka ee barberry waxaa isticmaalay wadaaddada iyo bogsashada ee Masar, Hindiya, Baabil. Kiniinnada dhoobada ah ee Assyrian-ka ah waxay kaydiyeen macluumaad ku saabsan sida barberry loo isticmaalay in lagu nadiifiyo dhiigga 2500 sano ka hor. Avicenna ku taliyey in ay bogsiiyaan boogaha iyo ka saar xitaa la caawiyo barberry. Dhamaan qarniyadii dhexe, cagaarshow, avitaminosis, scurvy ayaa lagu daweeyey warshadaan. Laga soo bilaabo qarnigii 16aad, xannibaadyada ayaa bilaabay inay si wayn u koraan England, Faransiiska, Iswidhan, Talyaaniga.
Miyuu ubaxu ku jiraa daawada rasmiga ah?
Awoodda bogsashada ee barberry waxaa qaata dhakhaatiirta dalal badan. Barberry ayaa caan ku ah: daawooyinka iyada oo si ballaaran loo soo saaro Talyaaniga (daweynaha caloosha, burooyinka calaamadaha ku dhaca), Hindiya (cudurada ay ku faafaan kaneecada), Japan (daawooyinka ladagaallanka ah), Ingiriiska, Shiinaha iyo Maraykanka (ka yimaada dhiig baxa, dhiig karka, iwm.).
Farmashiyadayada waxaa ka jira:
daawo laga sameeyey jilif barberry, - "Berberine bisulfate" (baakada waxaa ku jira 50 kiniin). Hepatitis, cholecystitis iyo kuwo kale ayaa lagu daaweeyaa wakhtigan tijaabada ah ee la baaray oo la awoodi karo wakiilka bilicda ah;
"Choleletin" 1, 2 (48% tincture oo ku jira dabeecada barberry) - ka caawinta daacuunka;
tincture barberry (20%, 5%) - laga sameeyay caleemaha geedka. Waxay ka caawiyaan joojinta dhiigbaxa gudaha, xakameyn cadaadiska, hagaajinta shaqada beerka iyo murqaha wadnaha;
ururinta Zdrenko (loogu talagalay daaweynta papillomas genitourinary);
daawooyinka loo yaqaan 'homeopathic medicine' (granules) "Chole-Gran", "Uro-Gran", "Psyorizer").
Isticmaalka barberry ee daawada dhaqameed
Warshadda lafteeda barberry iyo dawooyinka daawooyinka ah ayaa saldhig u ah, waxay ku heleen codsi ballaadhan oo daaweyn dhaqameed. Isticmaalka badeecooyinka dabiiciga ah oo aan lahayn kiimikada kiimikada ee kiimikada ah waxay u saamaxeysaa jirka in ay bixiso gargaar wax ku ool ah.
Waa muhiim! Barberry waa gudbiye xayawaanka miraha (Ruushka Graminus Pers.) Dalagyada (badi dalag iyo caws). Ka boodi khatarta lagama maarmaanka u ah - halista faafinta waxay ku haboontahay keliya marka la eego xaalad deg deg ah ee dalagyada dhirta.
Barberry ka baxo decoction boogaha iyo lallabo
Qalabka waxaa laga diyaariyey caleemo qallalan. Hal galaas oo biyo ah ayaa u baahan 20 g oo ah qalabka cayriin. Xardho caleemaha, ku rid weel. Ku shub biyo qabow. Marka uu boogo, yareeyo kuleylka iyo kariyo maraq 15 daqiiqo oo kale. Ku adkeyso ugu yaraan 40 daqiiqo. Markaad karisid, qaar ka mid ah biyaha ayaa uumi-baxaya, sidaa daraadeed biyo karkarin ayaa lagu dari karaa. Qaado seddex jeer maalintii.
Decoction miro sida barberry sida febrifuge
Si 200 ml oo ah maraq, waxaad u baahan doontaa 40 g oo ah nooca berry qalalan (ka hor inta ay dhaleen barberry, waa in la jarjarey), kasoobaxa iyo karkariyo nus saac. Cadaadis oo ku shub biyo karkaraya (keen mugga ilaa 200 ml). Daawada ka hor intaadan cunin 50 ml.
Xididdada Barberry ee dib u habeyn lagu sameeyo cagaarshow
Wixii maraq wuxuu u baahan doonaa nus shaaha oo ah shaaha qalalan ee dhulka. Karkari xididdada biyaha (200 ml) iyo kari ilaa nus saac. Qaado hal shaambo saddex jeer maalintii.
Ma taqaanaa? Giriiggii hore, barberry ayaa lagu beeray beeraha - dadku waxay rumeeysan yihiin in baadiyaha ay farxad u tahay guriga. Carabyadu waxay ku daraan cereemada dufanka ah ee loo yaqaan 'lovers' dishes - tani waa in ay kordhiso xoojinta iyo soo jiidashada. Sannadkii 2008, aqoonyahanno ku sugan dalka Talyaaniga ayaa awood u yeeshay in ay diyaariyaan diyaarinta dhirta aan ka badnayn Viagra.
Decoction ee xididada ee caabuqa cirridka
Xiddiga Barberry si fiican u ciribtiro bararka afka ilmagaleenka - daaweynta waxaa lagu fuliyaa by decoction. Si saameyn ugu fiican, raaci bareeg ah oo ka mid ah decoctions ee xididada iyo jilif. Isku midkee iyaga. Waa lagama maarmaan in la hor mariyo walxo cayriin ah (1/2 shaaha halkii 200 ml), karkari. Karkari muddo 30 daqiiqo ah, ku dar biyo (meeshii la uumili lahaa) iyo cadaadiska. Afka dhowr jeer maalintii raaci.
Tincture caleenta barberry ee cudurada kilyaha iyo beerka
Caleemaha la qalajiyey (10 g) googooyi, ku shub hal galaas oo biyo ah karkaraya, si qumman u xir, qoynin 20 daqiiqo.
Qabow si tartiib tartiib ah (ilaa hal saac). Cadaadiska, haddii ay lagama maarmaan noqoto, ku dar biyo la kariyey. Cab daroogada afar jeer maalintii, 50 ml.
Faleebo darbiyada ku jirta gawska
Hal iyo bar oo barbaro ah oo ah jilif waa in lagu rakibaa weel dhoobo ah, ku shub 100 ml oo khamriga ah, shukuur iyo ku rid mugdi 14 maalmood. Cadaadiska. Ku kaydi meel qabow, ka ilaali iftiinka. Qaado daroogada waa inay ahaataa bil iyo badh ilaa 20-30 dhibcood saddex jeer maalintii. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo laba koorso oo daaweyn ah sanadkiiba (iyaga oo u dhaxeeya iyaga u dhaxeeya).
Waa muhiim! Dhammaan daawooyinka ka soo barberry waa in la sameeyo kaliya in dhaldhalaalka, dhalooyinka ama qalajiyeyaasha.
Sida loo isticmaalo barberry ee cosmetology
Waxaa laga munaaqashoodaa waxa loo baahan yahay barberry, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro in baruurta dabiiciga ah ay si fiican u daryeeli karaan maqaarka, timaha, iwm. Jeexitaanka geedkan waxaa badanaa loo adeegsadaa kiknoolajiyeyaasha loogu talagalay wax soo saarka muusikada (tonics, kareem, shampoos, iwm.). In kondomka dadweynaha ee hababka of barberry samayn decoctions:
ka soo horjeeda dabka. Karkari laba qaado oo miro qallalan ah 200 ml oo biyo ah. Ka dib markaad ladnayso iyo qaboojinta, isticmaal markaad timaha ku dhaqdo shaambo caadiga ah - xoqin madaxa;
xajin timaha. Decoction ah ee caleemaha iyo miraha waxay u fiican tahay timaha engegan iyo xanaanada madaxa (waxay ka hortagtaa jilicsanaanta, cuncunka iyo bararka maqaarka, naaquska cuncun). Dhirta la qalajiyey ama midhaha cusub iyo caleemaha of barberry. In baaquli dhaldhalaalka, soo dhaji walxo ceeriin biyo karkaraya iyo ka tago ilaa 40 daqiiqo. Muddada daaweynta - bil gudaheed (oo leh timo joogto ah oo timo ka dib marka la dhaqo madaxa);
barafka qurxinta. Muuqaal maalinle ah oo leh cube ah maraq la qaboojiyey ayaa dib u soo noolaanaya isla markaana maqaarka maqaarkiisa, wuxuu ka nadiifiyaa finanka, dhibcaha da'da yar, oo xajiya laalaabkii;
si ay u nadiifiso maqaarka iyo ka saarista lafdhabarta wajiga iyo gacmaha. Losates waxaa laga sameeyey decoction, barkadaha ayaa loo sameeyey gacmaha.
Maaddooyinka barbaraha ayaa si fiican u cadeeyay:
dib u nooleynta Afar qaado oo ah nooca berry cusub si ay u gooyaan xaalad baradho la shiiday, qaso qaado oo ah labeen dhanaan, jalaatada iyo tufaax dhexdhexaad ah. Codso maaskaca wejiga kadibna 10 daqiiqo ka dib ku maydho shaah cagaaran oo la shiiday;
nafaqo leh. Maaskarada miro yar yar (muraayad), oatmeal (miraha nuska), ukunta, shaaha oo ah malab iyo badh koob oo caano kulul ah ayaa si firfircoon u dhaqma. Ku shub caano ku dar oatmeal (si aad u barareyso), jarjirka berry, wax walbana waa isku dar. Biyo raaci 15 daqiiqo ka dib.
Dalabyada Barberry Daaweynta nabdoon ee miisaan lumis - Tincture gaar ah ee caleemaha yar yar (20 g) on ​​khamriga.
Leaves ku shub 120 ml oo khamri ah iyo laba toddobaad oo lagu meeleeyo mugdiga iyo qaboojinta (ka hor intaadan helin midabka madow iyo acid).
Koorsada daaweynta waa 30 dhibcood ka dib cuntada (saddex toddobaad).
Isticmaalka barberry ee karinta
Barberry sida cuntada waa loo isticmaalaa meel kasta, iyo isticmaalka cunto karinta waa dhaqan dheer. Cabbaasiga iyo Cabbaasta Aasiyada Aasiyaanka ah waxay ka sameeyaan cunnooyinka caadiga ah ee qamadiga iyo shurpa laga bilaabo berry iyo caleemaha - geedi socodka karinta ayaa la dedejiyey, suxuunku wuxuu helayaa dib-u-qabasho wacan. Barberry waxay heshay codsiyo ballaaran oo soo saarista wax soo saarka macmacaanka (sharoobada, jellies, macmacaanka, marshmallows, iwm.). Barberry waxaa laga sameeyey berry ah:
sharoobada Kadib si taxadar leh u maydhin berry, karkariyo si ay u noqoto gobolka baradho la shiiday. Cadaadiska, ku dar sonkorta (1: 1) oo isku kari 10 daqiiqo oo kale (si joogto ah uga saara xumbada). Sharoobada kulul xiran ee dhalooyinka laisugu sameeyey;
casiir Kadib markaad ku tuujineysid casiirka, waxaa lagu shubaa gasacadaha nadiifka ah iyo la kariyey (15 daqiiqo - saxaro litir), ka dibna la shaabadeeyey.
Casiirka waa mid hodan ku ah dhammaan kuwa ka badan barberry waxtar leh. Ka dibna, casiirku waa la qasi karaa, cabitaannada kale ayaa la diyaariyaa;
macaanka. Buuxi miraha sonkorta (1: 1) oo hayso 12 saacadood. Isku kari ilaa 20 daqiiqo. Malakka kulul ee la karkariyey ee dhalooyinka 30 daqiiqo;
xawaashka iyo kalluunka. Kiilo ah nooca berry ah si ay u karkariyaan, xoqin iyada oo shaandho wanaagsan. 250 g oo sonkor ah iyo dhir udgoon (qorax, xiirto, basil, sinjiga, iwm.) Ayaa lagu daraa tiro badan. Karkari ilaa qaro;
shaah barrow. Caato ah oo udgoon, waxay leedahay waxyaabo badan oo faa'iido leh, tones. Brewed 1 tsp. qallaji berry barberry in 200 ml oo biyo ah karkaraya, oo lagu daray 8-10 daqiiqo. Sonkorta waxaa lagu daraa dhadhan.
Ma taqaanaa? 19-kii iyo qarnigii 20-aad, xilligii dayrtii, kvass barberry, qoryo xoog leh (oo lagu qasi jiray biyo iyo cabitaan) ayaa laga diyaariyey barberry ee Moscow laga bilaabo barberry. Gaar ahaan qiimeeyo sida xawaashka wanaagsan ee barberry la pickled barberry - berry ku shubay sharoobada sonkorta-cusbo leh khal iyo khudradda.
Barberry iyo ubaxyada huruudka ah (oo leh qosol badan iyo ur aan fiicnayn) ayaa lagu qiimeeyaa sida warshad malab oo cajiib ah. Malabka Barberry wuxuu leeyahay midab dahabi ah, dhadhan qani ah iyo caraf udgoon. Intaa waxaa dheer, sifooyin badan oo daaweyn ah ee barberry waxaa lagu kaydiyaa, iyo malab this xaq ah loo yaqaan daawo.
Muhiimadda weyn waa ururinta saxda ah iyo kaydinta alaabta ceeriin ah. Miro barafku waa god adag, sidaas awgeed waa lagama maarmaan in la nadiifiyo naftaada kahor intaadan soo ururin - gacmo gashi qaro, dhar xiran gacmo dheer iyo wixii la mid ah. Shuruudaha diyaarinta qaybaha kala duwan ee warshadda waa kala duwan yihiin:
Hantida xididada la qabto April ama November (inta lagu jiro xilliga nasashada). Xaddiga xididdada la kariyay waa in aanay ka badnayn saddex daloolow hal dalool oo dhan xididdada dhirta (dib-u-goosashada ee xididdada geedka isku mid ayaa suurtagal ah ugu yaraan shan sano kadib). Xididdada waxaa lagu nadiifiyaa ciidda, meelaha barafoobay ama madow. Waa wax aan suurtogal ahayn in la dhaqo - Berberine waa la dhaqayaa.
Miraha la uruuriyay Sebtembar-Noofember. Kaliya miro baaluq ah ee barberry waa la goostay - waxay leeyihiin hantida ugu caansan ee faa'iido leh (oo aan qaangaarin ama berry cagaaran ku jira alkaloids badan).
Bark goostay Abriil iyo Maajo. Guga, waxaa si fudud looga saaraa caleemaha (iyada oo la kaashanayo dhererka iyo jarista dhirta).
Leaves (guud ahaan, ma waxyeeleynin cudurrada ama cayayaanka) waxaa lagu ururiyaa gacmo (jeexjeexin, sida caadiga ah, dhalada caleenta leh caleemaha) bishii May - Juun.
Qalabka ceeriin ee la uruuriyey ayaa la qalajiyey: waxaa loo gooyey lakabka keliya ee hoostiisa (ama qallajiye) leh hawo hawo wanaagsan oo wanaagsan. Calaamad u ah diyaargarowga midhaha - miro dhoobo aan lahayn, haddii aad gacanta ku qabato gacanta. Caleenta la qalajiyey si wanaagsan ayaa leh midab liin leh oo ah nasasho, ur aan fiicneyn iyo dabayl qadhaadh ah. Alaabta ceeriin qallalan waxaa lagu kaydiyaa sanduuqyada kartoonada, warqadaha ama bacda linenka ah illaa aan ka badnayn labo sano (xididdadu waa saddex sano).
Contraindications iyo waxyeelo ka soo barberry
Isticmaalka aan habooneyn ee barberry waxay keeni kartaa cawaaqib culus oo aan macquul ahayn - guryahooda faa'iidada leh iyo khatarta ah ayaa badanaa la xiriira. Sidaa daraadeed, kartida dhirta si ay u kiciso dhaqdhaqaaqa murqaha ayaa aad u faa'iido leh haweenka xilliga dhalmada ka dib (kordhinta foosha ilmo-galeenka), laakiin waxay keeni kartaa dhicin haddii aad qaadato maqaarka inta aad uurka leedahay. Khilaafaadka waxaa ka mid ah:
da'da ka yar 12 sano;
noocyada kala duwan ee cagaarshowga;
cirrhosis of beerka;
dhiigbaxa inta lagu guda jiro menopause.
Waa muhiim! Marka daaweyn leh barberry, waa in aad la tashatid dhakhtar - content sare ee berberine wuxuu dhaawici karaa beerka. Isticmaalka miraha aan qaangaarka lahayn ee barberry waa nolosha khatarta ah - waa sun.